Tufts University (विस्तार गर्न छवि क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
Tufts University एक निजी अनुसन्धान विश्वविद्यालय हो जुन मेस्टरफोर्ड, मासोचुसेट्स को मास्टफोर्ड / सोडेरिल पडोस मा स्थित छ। Tufts को 1852 मा क्रिस्ट्स कलेज को रूप मा ईसाई Universalists द्वारा स्थापित गरिएको थियो। परिसर Walnut हिल संग बस्छ, मेडफोर्ड मा उच्चतम बिंदु, बोस्टन र आसपास को उपनगरहरु को विद्यार्थी विचारहरु लाई प्रदान गर्दछ।
टाफ्स विश्वविद्यालयमा 10,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू नामाकरण गरिएको छ। विश्वविद्यालय दस स्कूलहरुमा आयोजित छ: कला र विज्ञान को स्कूल; ईन्जिनियरिङ् स्कूल टिस् कलेजको नागरिकता र सार्वजनिक सेवा; कलेजको विशेष अध्ययन; फ्लेचर स्कूल ऑफ कानून र डिप्लोमेसी; दन्त चिकित्सा स्कूल चिकित्सा स्कूल Sackler स्कूल ऑफ ग्रेजुएट बायोकोमिकल अध्ययन; फ्रिडमान स्कूल अफ पोषण र नीति; र कममिन्स स्कूल ऑफ पशु चिकित्सा औषधि।
Tufts विश्वविद्यालय को मोस्ट, जम्बो द हथेन्ट, पीटी बर्नम को प्रसिद्ध हाथी को सम्मान मा चुनेको थियो। बरनम विश्वविद्यालयको सबैभन्दा प्रारम्भिक फायदेक्टर थिए। बर्नम संग्रहालय प्राकृतिक इतिहास को निर्माण 1884 मा परिसर मा र जम्बो को भरपूर छिपी मा स्थित थियो। आज, जम्बो को एक मूर्ति बर्नम हॉल बाहिर स्थित छ।
Tufts विश्वविद्यालय प्रोफाइल
शीर्ष मासाचुसेट्स कलेज र विश्वविद्यालयहरू
शीर्ष नयाँ इङ्गल्याण्ड कलेज र विश्वविद्यालयहरू
एसएटी विषय टेस्ट चाहिने कलेजहरू
बोस्टन क्षेत्र कलेज
टुउट्स हॉलमा ट्रौ हॉल (विस्तार गर्न छविमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
एक सार्वभौमिक पादरी र ट्रफ्सको पहिलो अध्यक्ष होल बलाऊको नाममा बलौ हल्ला नाम दिइएको थियो। 1855 मा ट्रफ्स को उद्घाटन समारोह को समयमा, Ballou ले भन्यो, "यदि यदि टाउफ्ट्स कलेज को एक पहाड मा एक बीकन खडा को रूप मा रोशनी को एक स्रोत हो, जहां यसको प्रकाश छिपी नहीं रहयो, यसको प्रभाव स्वाभाविक रूप देखि सबै प्रकाश जस्तै काम गर्नेछ; यो डिस्कोभोज हुनेछ। "1857 मा स्वीकृत आधिकारिक महाविद्यालय सील, आदर्श वाक्य पे र एट लट (शान्ति र लाइट) लाई भेटिन्छ। टफ्सको प्रारम्भिक दिनमा, भवन भवनको लागि घर र क्लासरूम ठाउँ थियो। आज, Ballou हॉल राष्ट्रपति कार्यालय को घर हो। Ballou बाहिर राष्ट्रपति को लॉन, विद्यार्थीहरु को लागि एक कोटा को रूप मा कार्य गर्दछ।
Tufts University मा राष्ट्रपति लान
राष्ट्रपतिको लन - ट्रफ्स युनिवर्सिटी (विस्तार गर्न छवि क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
राष्ट्रपतिको लनले राष्ट्रपति कार्यालयको घर बटाउ हॉल सम्म फैलिएको खपतमा स्वागत गेटको रूपमा कार्य गर्दछ। 1852 मा भवन र लान दुवै निर्माण गरियो, यो परिसरमा सबैभन्दा पुरानो वास्तुकला बनाइयो। वर्ष भरमा सुरुङ राष्ट्रपति लनले स्वागतलयको स्वागत गेटको रूपमा अतिथिहरूलाई भेट्न र आरामपूर्वक कम्पासमा जीवनको कुकुरबाट बच्न खोज्ने ठाउँको खोजी गर्दछ।
डेविस स्क्वायर, टाफ्स विश्वविद्यालय नजिकै
टिफ्स विश्वविद्यालय नजिकै डेविस स्क्वायर (विस्तार गर्न छविमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
Tufts मुख्य क्याम्पस मेडफोर्ड / सोरर्वेल को वाल्टिन हिल पड़ोस, बोस्टन, मैसाचुसेट्स को एक उपनगर मा स्थित छ। Somerville को केन्द्र नजिकै नजिकै डेविस स्क्वायर, एक लोकप्रिय लिङ्ग र विद्यार्थीहरुको लागि अवकाश स्थान हो। डेविस स्क्वायरले विभिन्न प्रकारका व्यापारिक, भोजन, र रात्री जीवन विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। डेविस डाउनस्टस्ट बोस्टन देखि चार मील को दूरी मा स्थित छ र एमबीएटा रेड लाइन संग एक मेट्रो स्टेसन द्वारा सेवा गरिन्छ।
डेविस स्क्वायरलाई आधिकारिक रूपमा 1883 मा एक वर्ग नामित गरिएको थियो। यो 190 को दशकको मध्यमा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति अनाज व्यापारीको व्यक्ति डेविसको सम्मानमा राखिएको थियो। खराब कला संग्रहालय देखि हिप डीजल कैफे, डेविस स्क्वायर एक जीवंत पड़ोस एक एक्लेक्टिक बोहेमियन ब्लेयर संग छ।
डेभिस स्क्वायरले वर्षभरि खाद्य ट्र्याक फेस्टिवल, हङ्क सहित त्यस्ता त्यस्ता त्यस्ता त्यस्ता उत्सवहरू पाउँछ! कार्यकर्ताको सडक ब्यान्ड र फ्लाफ फेस्टिवलको लागि एक उत्सव, एक वार्षिक उत्सव आर्चिबिल्ड क्वेरी र उनको आविष्कार: मार्शमेल फ्लफ।
स्कूल अफ आर्ट्स र साइंस
Eaton Hall - Tufts University मा कला र विज्ञान को स्कूल (विस्तार गर्न को लागी तस्वीर मा क्लिक गर्नुहोस)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
कला र विज्ञान स्कूल स्कूलले टिफ्समा सबैभन्दा ठूलो विद्यालय हो जुन 4,000 भन्दा पूर्ण समय विद्यार्थीहरू छन्। ईन्जिनियरिङ् स्कूलको साथमा, दुई स्कूलहरूले टुफ्ट्स सोमेरिलि परिसर बनाएर कला, विज्ञान र ईन्जिनियरिङ् (एएस एन्ड ई) को संकाय बनाउँदछ।
Eaton Hall मा स्थित यो कक्षा कोठा, एक ठेठ कक्षा कोठा हो जुन 24 देखि अधिक अकादमिक विभागहरु द्वारा कला र विज्ञान स्कूल मा प्रयोग गरिन्छ।
टिफट्स विश्वविद्यालय मा ईन्जिनियरिङ् स्कूल
एन्डरसन हॉल - टिफट्स विश्वविद्यालयमा ईन्जिनियरिङ्को स्कूल (विस्तार गर्न छविमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
एन्डरसन हॉल ईन्जिनियरिङ् स्कूलको घर हो। 1898 मा स्थापित, ईन्जिनियरिङ् स्कूल बायोमेडिकल, केमिकल, सिभिल, कम्प्यूटर, विद्युत, पर्यावरण र मकोनिकल इन्जिनियरिङमा कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ। विद्यालयले कला र विज्ञान, फ्लेचरचर डिप्लोमाको डिप्लोमेसी, र टिफ्स गर्डन इन्स्टीट्यूटको साथ दोहोरो डिग्री कार्यक्रम प्रदान गर्दछ। विद्यालय केन्द्रका लागि ईन्जिनियरिङ् शिक्षा र आउटरीचको घर हो, जो के-12 कक्षाहरूमा ईन्जिनियर शिक्षा सुधार गर्न समर्पित छ।
Tufts University मा टिस् लाइब्रेरी
Tufts University मा टिस् लाइब्रेरी (विस्तार गर्न छविमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
टिस् लाइब्रेरी क्याम्पसमा सबैभन्दा ठूलो पुस्तकालय हो। यसले स्कूलको कला र विज्ञान र ईन्जिनियरिङ् स्कूलमा सेवा गर्दछ। टिस् लाइब्रेरी संग्रह 915,000 भन्दा धेरै किताबहरू, 38,000 इलेक्ट्रनिक पत्रिकाहरू, र 24,000 भिडियो रेकर्डिङहरू छन्।
पुस्तकालयले डिजिटल डिस्प्ले स्टुडियोमा डिजिटल स्टोरेज स्टुडियोको उत्पादनको लागि समर्पित ठाउँ बनाउदछ। त्यहाँ छ मल्टीमीडिया कार्यस्थान, हरी स्क्रिन स्टुडियो, र एक रेकर्डिंग बूथ। कर्मचारीहरूले अडियो र भिडीयो सम्पादन, साथसाथै उत्पादन प्रविधिहरूसँग विद्यार्थीहरूलाई सहायता गर्छन्। फोटोशॉप, InDesign, Illustrator, र Final Cut Pro को लागि कार्यशालाहरू प्रति वर्ष डिजिटल डिजाइन स्टुडियोमा प्रदान गरिएको छ।
टिस् भित्र भित्र टावर क्याफे विद्यार्थीहरू कफी र स्यान्डविच प्रदान गर्दछ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, अध्ययनबाट सुविधाजनक ब्रेक। ठूला, सहज कुर्सियों र टेबलले विद्यार्थीलाई शैक्षिक सेटिङमा च्याट गर्न र सहयोग गर्न अवसर दिन्छ। क्याफे का घण्टा सूर्य-थोर 12 बजे - 1 बजे हो।
Tufts University मा मेयर परिसर केन्द्र
Tufts University मा मेयर क्याम्पस केन्द्र (विस्तार गर्न छवि क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
प्रोफेसर रो मा स्थित छ, मेयर क्याम्पस केन्द्र ट्रुट्स मा छात्र गतिविधि को लागि हब हो। यो परिसरको हृदयमा बस्छ, यो माथिल्लो र डाउनहिलबाट सजिलै पहुँचयोग्य बनाउदछ। 22,000 वर्ग फुट भवन कन्फिगरेसन कोठाहरू, विद्यार्थी संगठन कार्यालयहरू, विभागका कार्यालयहरू, क्याम्पस बुकस्टोर, र विद्यार्थी भोजनमा छन्। मेयर मा खाना खाने को विकल्प कैफे मेड, जो भूमध्य संलयन प्रदान गर्दछ; कफी र नाश्ता पट्टी; र ताजा सुकेको।
Tufts मा 300 देखि अधिक छात्र संगठनहरु छन्। प्रत्येक बिदा, संगठनहरू नयाँ विद्यार्थीहरूको लागि पला विद्यार्थी मेलामा विज्ञापन गर्छन्। क्यारिबियन क्लबबाट रोबोटिक क्लबमा यौन आक्रमणको रोकथामका लागि कार्य गर्न, टिफ्सले विद्यार्थीहरूको विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि चासोका लागि मेजबान गर्दछ।
Tufts विश्वविद्यालय मा Bendetson हॉल
Tufts विश्वविद्यालयमा Bendetson हॉल (विस्तार गर्न छवि क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
Bendetson हॉल अफ द ग्रेजुएट प्रवेश कार्यालय को घर हो। यो हरियो बाटोको साथ वेस्ट हॉल र प्याकार्डर्ड हॉलको बीचमा छ। 2013 मा, आवेदकहरु मध्ये 1 9% टाफ्स विश्वविद्यालय मा भर्ती छ। टिफ्ट्समा 10,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू नामाकरण गरिएका छन्, जसमध्ये 5,000 स्नातक छन्। 98% विद्यार्थीहरू पूर्ण-समय हुन्।
टिफट्स युनिवर्सिटीमा नागरिकता र सार्वजनिक सेवाको कलेज
Tufts विश्वविद्यालयमा नागरिकता र सार्वजनिक सेवाको कलेज (विस्तार गर्न छविमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
नागरिक र सार्वजनिक सेवाको जोनाथन एम। टिस्स कलेज, ईबेए संस्थापक पियरे ओमादिहारी द्वारा 10 करोड डलर को दान पछि, 2000 मा स्थापित भएको थियो। कार्यक्रमका विद्यार्थीहरूले कलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड साइंसेज र कलेज इन्जिनियरिङमा कक्षाहरूमा नामाकरण गर्न एक अनूठा पाठ्यक्रम सिर्जना गर्ने संसारमा सकारात्मक प्रभाव विकास गर्नका लागि काम गर्दछ। सन् 2006 मा, महाविद्यालय को जॉनathan टिस्स को $ 40 मिलियन उपहार को सम्मान मा कलेज को नाम बदल्यो। कलेज सामुदायिक साझेदारहरूको लागि लिंकन फिलिन सेन्टरको घर हो, जसले मेडफर्ड र सोमेरभिल्ल सहित टिफ्स र यसको होस्ट समुदायहरू बीचको स्थायी सम्बन्धलाई समर्थन गर्दछ।
टुफ्स विश्वविद्यालयमा ग्रानफोफ संगीत केन्द्र
Tufts University मा Granoff संगीत केन्द्र (विस्तार गर्न छवि क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
एडाइडमैन आर्ट्स सेन्टरको बगलमा स्थित, ग्रानफोफ म्युजिक सेन्टरले डिस्टलर प्रदर्शन हॉल, 300 सीट रिजर्भ हॉललाई सुविधा दिन्छ। हॉल लाइव ध्वनिक प्रदर्शनको लागि प्रदर्शनको लागि डिजाइन गरिएको थियो। यसको अनूठे "बक्स भित्रको बक्स" डिजाइनको कारण, कुनै बाहिरको ध्वनिले हॉलमा उल्लङ्घन गर्न सक्दैन। समेत हॉलको वेंटिलेशन प्रणाली पूर्ण रूपमा मौन बनाइएको थियो।
संगीत केन्द्रले आफ्नो निम्न स्तरमा बढ्दै आएको विश्व संगीत संग्रहलाई पनि होस्ट गर्दछ। यस संग्रह मा भागने वाला यंत्र, जो विश्वविद्यालय को पश्चिम अफ्रीकी ड्रम र नृत्य को प्रतीक द्वारा प्रयोग गरिन्छ।
1,500 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले प्रत्येक वर्ष टाउटहरूमा संगीत कक्षाहरूमा नामाकरण गर्छन्। Distler प्रदर्शन हॉल को अतिरिक्त, ग्रैनफो संगीत संगीत केन्द्र तीन ध्वनिक रूप देखि सील क्लासरूम, संकाय कार्यालयहरु, एक मल्टीमीडिया प्रयोगशाला, रिहर्सल कोठा र लिली म्यूजिक लाइब्रेरी को सुविधा प्रदान गर्दछ।
Tufts University मा Aidekman कला केन्द्र
Tufts विश्वविद्यालयमा Aidekman कला केन्द्र (विस्तार गर्न छवि क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
ग्रानफोफ संगीत केन्द्रको बगलमा स्थित एडाइडमैन आर्ट्स सेन्टर, टिफट्स विश्वविद्यालय आर्ट ग्यालरीको घर हो, साथसाथै विश्वविद्यालयको कला कार्यक्रम र स्टुडियो स्पेस हो। ट्युफट्स विश्वविद्यालय वेबसाइटको अनुसार ग्यालरीले काम गर्ने प्रदर्शनलाई समर्पित गर्दछ जुन "कला र कला विधामा नयाँ, वैश्विक दृष्टिकोण" को अन्वेषण गर्दछ। यसलाई 1952 मा ग्यालरी ग्यारहको रूपमा स्थापित गरिएको थियो। ग्यालरीले एउटा एप होस्ट गर्दछ, "संग्रहालय बिना वालहरू," जो किमस वरिपरि हेरिएको कला देखाउँछ। प्रत्येक मई, Aidekman आर्ट्स सेन्टर एक प्रदर्शनी को सुविधा गर्दछ जो Tufts संग्रहालय अध्ययन कार्यक्रम, को कला र विज्ञान स्कूल को एक स्नातक कार्यक्रम को छात्रों द्वारा आयोजित।
ओलिन सेन्टरमा ट्रफ्स विश्वविद्यालय
ओलिन सेन्टरमा ट्रफ्स विश्वविद्यालय (विस्तार गर्न छविमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
Walnut Hill मा, ओलिनलिन रोमान्स भाषा विभाग र जर्मन विभाग, रूसी र एशियाई भाषाहरु को स्कूल अफ आर्ट्स र साइंस मा प्रवेश गर्दछ। भवन आवासीय र अकादमिक क्वाड को बीच विभाजित को रूप मा कार्य गर्दछ। यो जॉन ओलिन ओलिन इंडस्ट्रीजको नाममा राखिएको थियो। त्यहाँ पहिलो फ्लोरमा एक अध्ययन लाउंज छ, जुन सुन्दर ईटा भवनको चौडा विन्डो द्वारा प्रकाशित हुन्छ।
गोदार्ड चैपल र ट्रफ्स विश्वविद्यालय
गोर्डर्ड चैपलमा ट्रफ्स विश्वविद्यालय (विस्तार गर्न छविमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
1883 मा निर्मित, गोदार्ड चैपल Tufts परिसर मा आध्यात्मिक र नैतिक जीवन को लागि केन्द्र हो। चैपल राष्ट्रपतिको लनको उपेक्षा गर्दै बाउल्लो हॉलको बगलमा स्थित छ। यो मरियम गोदर्ड (वर्मान्टको गोदार्ड कलेज स्थापनामा उनको भूमिकाको लागि चिनिन्छ) को सम्मानमा उनको नाउँ दिइयो। चैपलको प्रमुख बाहिरी पत्थर सोर्सेरेलमा स्थानीय रूपमा खसेको थियो।
Tufts University मा डाउलिंग हॉल
Tufts विश्वविद्यालयमा डाउलिंग हॉल (विस्तार गर्न छविमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
यसको प्रवेशमा ठूलो जम्बो संग लगाईयो, डाउलिंग ह्याङ्ग टिफ्ट्स भिजिटर केन्द्रको घर हो। यो Bendetson हॉल को आसपास परिसर पहाड मा स्थित छ र केवल एक पैदल पुल द्वारा पहुँचा जा सकता छ। रातमा रोशनीले हिँड्ने पुललाई उज्ज्वल गर्छ र हात्ती बस्टलाई हाइलाइट गर्दछ। इमारत को वित्तीय सहायता कार्यालय र विद्यार्थी सेवा केन्द्र पनि घर हो।
Tufts University Cannon (विस्तार गर्न छवि क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
एक क्यान्सस प्रतिमा, कोनन गृह युद्ध युग एसएसएस संविधानबाट एक तोपको प्रतिकृति हो जुन 1956 मा मेडफोर्ड शहर द्वारा विश्वविद्यालय को दान गरिएको थियो। यो टफ्सको पहिलो फुटबल गेममा हार्वर्ड को धुन को इनाम को रूप मा दिइएको थियो। खेले। यसैले कोनन हार्वर्ड विश्वविद्यालय तिर संकेत गरिएको छ। वर्ष भर, विद्यार्थी समूह र युनियन संगठनहरूले रातको भित्तामा प्यान्ट पान्छन्। छात्रहरूले भित्तासम्म तोपको रक्षा गर्छन् वा अरूले आफ्नो काममा प्रतिद्वंद्वी समूहको समूह चित्रण गर्छन्।
Tufts University at Carmichael Hall
ट्रफ्स विश्वविद्यालयमा क्यामेरीचेल हॉल (विस्तार गर्न छविमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
कार्मिचेल हॉल एक आवासीय हॉल र आवासीय क्वाड मा माथि स्थित डाइनिंग प्लाजा हो। हॉलले त्रि-अधिवेशन, डबल-अधिवेशन र एकल-अधिवेशन कोठालाई सह-फर्शहरूमा राख्दछ, यसलाई underclassmen को लागि आदर्श छात्रा बनाइन्छ। प्रत्येक मंजिलमा दुई एकल सेक्स स्नानघर छ। वहाँ टेबल, अध्ययन स्पेस, र पहिलो तल मा एक टेलिभिजन संग एक ठूलो लाउंज क्षेत्र हो। क्यामेराचेल डाइनिंग सेन्टर, परिसरमा सबैभन्दा ठूलो भोजन कक्ष हो, त्यहाँ विभिन्न मेनु वस्तुहरू प्रदान गर्दछ।
ह्यूस्टन हॉलमा ट्रफ्स विश्वविद्यालय
ह्यूस्टन हॉलमा टाफ्स विश्वविद्यालय (विस्तार गर्न छविमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
आवासीय क्वाडको साथ कम्र्मिचेल हॉलको बगलमा स्थित ह्यूस्टन हल पहिलो वर्षको छात्र आवासीय भवन हो। 126 भन्दा बढी डबल अधिवेशन कोठाहरू छन्। ह्यूस्टन पनि चार-व्यक्ति अपार्टमेट्स को सुविधा गर्दछ, हरेक एक निजी रसोईघर, बाथरूम र साधारण क्षेत्र संग। प्रत्येक फ्लोरमा चार सिंगल सेक्स बाथरूम छन्। यदि बासिन्दाहरूले डिनरको लागि बस्न मन पराउँछन् भने तहखानेमा अवस्थित एक सानो सानो भान्सा हो, वा तिनीहरू नजिकैको क्यार्मिचेल भोजन केन्द्रमा उपस्थित हुन सक्छन्।
ल्याटिन वे वे टुफट्स विश्वविद्यालय
लैटिन वेन टुफ्स यूनिवर्सिटी (विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस् छवि)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
लैटिन वेभ डेविस स्क्वायर नजिकैको पहाडीको छेउमा नजिकै स्थित एक आवासीय छात्रावास हो। यो चार-व्यक्ति र दस-व्यक्ति अपार्टमेट्सको लागि घर हो, प्रत्येक निजी रसोईघर, बाथरूम र साझा कोठाको विशेषता छ। साधारण कमरहरू सोफेहरू, प्रेम सीटहरू, र कफी टेबलमा सुसज्जित छन्। निवासीहरू सामान्यतया पहिलो-वर्षका विद्यार्थीहरू र सोफोमोर हुन्छन्, किनकि प्रायः उच्चवर्धक विद्यार्थीहरू आवासको लागि बन्द-परिसरमा जान्छन्।
एलिविस ओवल टुफ्स विश्वविद्यालयमा
टुफ्स विश्वविद्यालयमा एलिस ओवल (विस्तार गर्न छविमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
Walnut Hill को तल मा स्थित छ, एलिस ओवल जम्बो फुटबल को घर हो। ओवललाई 1899 मा निर्माण गरिएको थियो र एक बेसबल हीरे, फुटबल मैदान, फुटबल मैदान, र छ-होल गोल्फ कोर्स समावेश गरिएको थियो। ओवल भित्र, डुस्ल्टल्ट ट्र्याक र फील्डले धेरै क्षेत्रीय च्याम्पियनशिपको आयोजना गर्यो। Tufts एथलेटिक्स एनसीएए विभाजन III मा न्यू इंग्लैंड सानो कलेज एथलेटिक सम्मेलन मा प्रतिस्पर्धा गर्दछ।
नयाँ कलेजको लागि राम्रो कारणहरू
2018 मा खरीद गर्न 8 बेस्ट बाइक ताले
बालबालिका र बालबालिका
पियानो संगीतमा सांगीतिक प्रतीकहरू
कसरी कन्जुगेट "Coudre" (सिवे गर्न) फ्रेन्चमा
क्याथोलिक चर्चको पापासी
10 सबै समय को सर्वश्रेष्ठ बटल टीम
डेल्फी अनुप्रयोगबाट दर्ता गर्नुहोस् DLL र ActiveX नियन्त्रण
पागल वैज्ञानिक चित्र
Euphuism (शैली शैली)
के तपाईंको सेवालाई तपाइँको प्रतिद्वन्द्वीको अदालतमा दोहोरो उल्टाउन अनुमति दिइएको छ?
कसरी कन्जेगेट फ्रान्सेली नियमित - एआर शब्दहरू
परिभाषा र उपनामहरूको उदाहरणहरू
अमेरिकाका महानगरीय राष्ट्रपतिहरू बाट प्रसिद्ध उद्धरण
सबै कुराहरू एकसाथ काम गर्दछ - रोमी 8:28
7-अप संस्करण फोर्ड मस्तङ्ग
संगीत मन्त्रालय कसरी सुरु गर्ने
जसको अर्थ अर्थ र उत्पत्ति
कलाकार र गीतकारको रूपमा शीर्ष 10 मेघन ट्रेनर गीत
प्ले प्राइमर मिलान गर्नुहोस्
उपयोगी जापानी अभिव्यक्ति
190 कूल क्यूटका लागि कूल क्वेट्स
ब्लीच र सिरकाको लागि उपयोग गर्दछ
À पेरु प्राès